Anwala ịgbanwe ndị mmadụ; naanị hụ ha n'anya. Ishụnanya bụ ihe na-agbanwe anyị. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Anwala ịgbanwe ndị mmadụ; naanị hụ ha n'anya. Ishụnanya bụ ihe na-agbanwe anyị. - Amaghi ama
Anyị niile bụ otu, mana anyị enweghị atụ. Anyị niile nwere ihe dị iche na nke ndị ọzọ. Ka anyị na-ehiwe mmekọrịta, anyị achọpụtala na ndị mmadụ dị iche na otu anyị nwere ike isi tụọ anya ka ha dịrị.
Mmalite obi anyị nwere ike ịbụ ịgbanwe ha site na ịkọwa ihe niile na-enye anyị nsogbu. Mana nke ahụ abụghị ụzọ ziri ezi isi aga. Onye ọzọ ga-eche na you na-agwa ha emezighị emezi ha ma ga-ajụ ịnabata ọbụlagodi na ha nwere ụfọdụ mmejọ ha nwere.
Ọzọkwa, anyị kwesịrị ịnakwere na anyị niile nwere ụfọdụ mmejọ. Kama ịdị na-ebo anyị ebubo ma ọ bụ na-atụtụ aka maka nke ahụ, anyị niile ga-achọ inwe obi ụtọ maka ụdị onye anyị bụ. Ee, enwere oge ndozi, Ma anyi n’enye nkwado nke anyi n’egbochi ha.
Ọ dị mkpa ịhụ n'anya ma gosi ịhụnanya. Ọ bụ ihe na-eme ka anyị nwee ahụ ọkụ ma chọọ. Mgbe ị jiri obi gị niile hụ mmadụ n'anya, ịchọrọ inye ha obi ụtọ niile dị n'ụwa. Ọ bụrụ na ọ gụnyere ịgbanwe obere ihe gbasara gị, mgbe ahụ ị ga-eji obi gị niile mee nke ahụ ma ọ bụ jiri ezi obi mee obere ihe. Ọ ga - eme ka ị bụrụ ezigbo mmadụ na usoro ahụ.
Nkatọ rụrụ arụ bụ ụzọ dị mma isi kwuo ihe mana ọ naghị arụ ọrụ maka ndị nwere mmụọ, yabụ, anyị kwesịrị ịkpachara anya banyere mmetụta onye ahụ ma ọ bụrụ na anyị ga-agbanwe ihe ọ bụla gbasara ha, anyị kwesịrị chọta ike n'ịhụnanya anyị ime ka nke ahụ mee.
N'ihe banyere ihunanya mara mma
Ihe omimi banyere ihunanya
Ama amara Quotes
Ezi Quot On Love
Ikwuputa ịhụnanya nke sitere n'ike mmụọ nsọ
Ekepepepepepe Banyere Ihunanya
Ihunanya na edemede
Ihunanya na mmeko okwu
Ihunanya na-eji eserese ese
Mmekọrịta Mmekọ ịhụnanya
Kwuru okwu banyere ndu na ihunanya
Kwuru okwu banyere ihunanya na ndu
Obere edemede banyere Lovehụnanya
Mfe Lovehụnanya Kwuru
Ezi Quhụnanya Kwuru
Mgbe ndị mmadụ kparịrị gị, ha na-ekpughe onye ha bụ, ọbụghị onye ị bụ. Ejila ya n'onwe gị. - Amaghi ama
N'oge ụfọdụ, anyị na-ezute ndị nwere obi ọjọọ n'akụkụ anyị, ma ọ bụrụ na ha nwere ike bewa anyị, anyị na-enwe…
Na mmiri na-enweghị mmiri, ọ dịghị ihe na-eto, mụta ịnabata oké ifufe nke ndụ gị. - Amaghi ama
Ọ na-ekwu na ọdịda bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ anyị n'ihi na ọ bụ naanị ha na-akpụzi anyị maka…
Mee ya n'ihi na ha kwuru na ị gaghị emeli ya. - Amaghi ama
Mee ya n'ihi na ha kwuru na ị gaghị enwe ike. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Emela ka ndị mmadụ na-adịghị mma ka ha, ha na-emeso gị omume ọma. - Amaghi ama
Youzọ ị na-emeso ndị mmadụ ga-ekpebi ụdị mmadụ ị bụ! Ọ na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara…
Mgbe ị bụ ezigbo mmadụ, ị gaghị atụfu ndị mmadụ, ha na-efufu gị. - Amaghi ama
Ọ dị mkpa iburu n’uche na anyị enweghị ihe anyị ga-egosi onye ọ bụla, belụsọ n’onwe anyị. Anyị…